Online Radio Live Hosting-Blog - Sobiztrend ]
(अनलाइन रेडियोमा कसरि कसरि प्रतक्ष्य प्रसारण गर्ने?)के तपाई आफ्नो अनलाइन रेडियोबाट RJ गर्न चाहनुहुन्छ ! त्यसो भए, तपाइको आफ्नो वेबसाइटबाट Online Hosting गर्न सक्नुहुन्छ ! त्यसको लागि तपाइलाई निम्न लिखित कुराहरुको आबस्यक पर्छ !
एक थान ल्यापटप वा कम्प्युटर साथमा हेडसेट भए धेरै राम्रो,
सायद तपाइको website मा रेडियो पनि बजाउने भनेर Service Provider लाइ त पक्कै भन्नु भाको होला !
अब निम्न लिखित कुरा मैले भनेको अनुसार गर्दै जानुहोस् !
पहिला तपाइको personal कम्प्युटरमा मा winamp भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहोस् !
तपाइको operating system windows हो भने यो लिंक बाट
डाउनलोड गर्नुहोस् ! (http://www.filehorse.com/download-winamp/download/)
तपाइको operating system mac (linux) हो भने यो लिंक बाट डाउनलोड गर्नुहोस् ! (http://mac.filehorse.com/download-winamp/download/ )
अब winamp install गर्नुहोस् !
अब winamp को लागि shoutcast DSP plugin install गर्नुहोस् !
डाउनलोड लिंक https://www.shoutcast.com/Winamp यहाँ पाउनु हुन्छ!
तपाइको आफ्नो वेबसाइटको cPanel login गर्नुहोस् ! cPanel Login गर्न जान्नु भाको छैन भने मेरो यो भन्दा अगाडी को How to Login in cPanel र How to upload mp3 on online radio? भन्ने लेख पढ्नुहोला !
माथिको दुवै लिंक पढ्नु भयो भने, रेडियो set up को बारेमा तपाइले थाहा पाउनु हुन्छ ! अब तपाइले Shoutcast Hosting को Left Sidebar भएको Management Section मा DJ manager ma जानुहोस् र Addanew DJ मा एउटा username र password राख्नु होस् ! र Add गर्नुहोस ! र Shoutcast ले तपाइको username, password, र connection port दिन्छ ! सजिलोको लागि तल देखाइएको screenshot हेर्नुहोस् !
3. अब winamp खोल्नुहोस् ! winamp खोलिसकेपछी तपाइले keyboard मा ctrl+p खिच्नुहोस् ! (अथवा winamp को स्क्रिनको माथिको भागमा Options menuको लास्टमा Preferances… देख्नु हुन्छ त्यसमा click गर्नुहोस् ! अनि तपाइले तल देख्नुभएको जस्तो screen देख्नुहुन्छ !
4. तपाइले winamp preferences को leftside मा Plug-ins मा DSP/Effect देख्नुहुन्छ ! देख्नुभएन भनि अघि install गर्नु भएको DSP/Effect Add गर्नुहोस् !
5. अब माथि देखिएको screen मा SHOUTcast Source DSP मा क्लिक गर्नुहोस् ! अनि तल देखाएको जस्तो स्क्रीन देख्नुहुन्छ !
6. अब SHOUTcast source DSP को output section मा तपाइको DJ output no., server address, port number, DJ user Id, password राख्नुहोस् ! जुन कुरा दोश्रो स्टेप मा हामीलाई SHOUTcast management भरेका थियौ ! अनि connect गर्नुहोस् !
7. अब mike वाला headset लगाउनुहोस् र प्रोग्राम चलाउन थाल्नुहोस् !